आमा - DURBAR TIMES
भगवान् यत्रतत्र सर्वत्र जहाँकही उपस्थित हुन नसकेपनि उनले ममताकी खानी , मायाकाे ढुकुटी र स्नेहकाे भाव एउटा नारीलाई प्रदान गरे जसलाई हामी आमा शब्दले सम्बाेधन गर्छाैँ ।
आमा शब्द नै ममताले भरिएकाे छ । आमा तिमी बिनाकाे जिन्दगी नै फिक्का र अपुराे लाग्छ । आमा तिमी छाै अनि संसार छ भन्ने आभास हुन्छ । संसारकाे सबै खुसी एकातिर अनि तिम्राे मुहारकाे हाँसाे एकातिर । तिम्रै हाँसाे अमूल्य र प्याराे लाग्छ । साँच्चिकै आमा शब्द कति प्याराे र मर्मस्पर्शी ; जतिचाेटी उच्चारण गर्दापनि मुख नथाक्ने, न त दिक्क नै लाग्ने । तिम्राे त्याग र अगम्यबाेध प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै तिमीलाई काेटी काेटी प्रणाम गर्दछु ।
विषम् परिस्थितिसँग पैठाजाेरी खेल्दै अभाव र तिरस्कारलाई सहर्ष स्वीकार गरी आफ्नाे जन्मथलाे छाेडी कर्मथलाेमा रमाउन सक्ने तिमी अन्नपूर्णाकाे छवि भएकी कति महान् छाै । तिम्राे त्याे न्यानाे काखमा आफ्नाे आफ्नाे शीर राख्न पाउँदा आफ्ना दुख , कष्ट र पीडाहरु तिम्राे माझ बिसाएझैँ लाग्छ आमा । आमा छिन् अब मेरा सबै समस्याहरु समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास पलाउँछ मनमा । यस्ती साक्षात देवीलाई मेराे काेटी काेटी प्रणाम छ ।
नाै महिनासम्म आफ्नाे काेखमा राखी , विभिन्न समस्या खेपेर एउटा शिशुलाई जन्मदिने तिमी नारी वास्तविक रुपमै भगवान् हाै । आफ्नाे सन्तानकाे राम्राे भविष्यकाे लागि दशनङ्ग्रा खियाएर आफ्नाे ईच्छा ,चाहना र आफूले देखेका सपना सहजै त्याग गरी सन्तानलाई संसारकाे सबै खुसी दिने काेशिस गर्ने एकमात्र मानिस तिमी हाै आमा । आफ्नाे परिवार र सन्तानकाे खुसीमा सँगै रमाउने अनि दुखमा ज्यादै पिर गरेर पनि दुख मेटाउन खाेज्ने क्षमता तिमीसँग मात्र छ। आमा तिमी त परिवार र सन्तानकाे राेग निर्मूल पार्ने ओखती हाै ।
आमा तिमीले बाल अवस्थादेखि तन्नेरी अवस्थासम्म आफ्नाे सन्तानकै अगाडि पछाडि गरी आफ्नाे खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँछाै । खै कसरी व्याख्या गरुँ म तिमीले आफ्नाे सन्तानकाे लागि गरेका ती त्याग र बलिदानहरु ? अनि पछि त्यहीँ सन्तानले तिमीलाई लत्याएर वृद्धाआश्रममा राख्दा तिमी कसरी सहन सक्छाै आमा ? कसरी आफ्नै सन्तानले दिएकाे राेदन र कष्ट मनमा राखेर बाँच्न सक्छाै आमा ? तिम्राे ममता र माया त कसैलेपनि बुझ्न सक्दैन हाेला !
आमा तिमी ममताकी खानी , तिमी त परिवारकी एकलाैटी रानी जसले आफ्नाे सन्तानलाई युवराज र युवराज्ञीकाे दर्जा दिएर पालनपाेषण गर्छाै । आमा तिमी शिक्षित भयाै भने परिवार शिक्षित हुन्छ । त्यसैले तिमीलाई सरस्वती माताकाे स्थानमा राख्दा याे मन कहिल्यै डगमगाउँदैन । आज आफूलाई थाेरै दुख पर्दा मन सार्है आतिन्छ र स्थिरमा रहदैन । तर, फेरी साेच्छु मैले झेलेका दुखभन्दा कयाैँ गुणा धेरै दुख आमाले झेलेपनि उनी आफ्नाे विचार र सिद्धान्तमा हिमाल झैँ अटल रहेर हरपल अगाडि बढ्छिन् । बुढेसकालमा आफू अशक्त हुँदापनि सन्तानकाे लागि घिस्रिएर कसरी काम गर्न सक्छिन्। तिमीलाई थकाई लाग्दैन ? आफ्नाे शरीरलाई आराम दिउँ भन्नेपनि बिर्सिने तिमीलाई दश औँला जाेडी काेटी काेटी प्रणाम गर्दछु ।
आमा अरुले पकाएकाे ८४ व्यन्जन खानाकाे परिकार भन्दा तिम्रा ती हातले पकाएकाे पिठाे र पानी नै सय गुणा मिठाे लाग्ने गर्छ । अझ तिमीले आफ्नै हातले खुवाएकाे पिठाे पानी पनि राजाशाहीकाे पकवान्न झैँ लाग्छ । आफ्नाे सन्तानकाे भाेक मेटाएर आफू भाेकै बसेतापनि अघाएकाे भाव प्रकट गर्ने तिमी घरकी अन्नदाता हाै आमा । आमा तिम्राे उपस्थितिले घर नै उज्यालाे हुन्छ । परिवार पूर्ण हुन्छ । घरमा लक्ष्मीकाे बास हुन्छ । तिमी छाै र जीवन सहज छ , सुन्दर छ । तिमीले देखाएकाे मार्गकाे कारण आज जीवनमा धेरै उन्नति र प्रगति भएकाे छ ।
३६५ दिन नै तिम्राे सेवामा तिम्रा सन्ताहरु हाजिर छन् । ३६५ दिन नै तिमीप्रति उत्तिकै माया छ , सम्मान छ । तर आज विशेष दिन अर्थात मातातीर्थ औँशी भएकाले तिमीलाई विशेष सम्झना अनि अगम्य माया आमा । सम्पूर्ण जननीलाई मातातिर्थ औँशीकाे शुभकामना । तिमीहरुकाे आशीर्वाद सधैँभरि रहिरहाेस् ।
Previous articleउपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने या नथप्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न आज बैठक
Next articleरूरू जलविद्युतले कमायाे ६ कराेड नाफा, बढ्याे प्रतिशेयर आम्दानी